Kubulawe ngesihluku isalukazi ebesihlala sodwa - Ilanga News
Home Izindaba Kubulawe ngesihluku isalukazi ebesihlala sodwa
Kubulawe ngesihluku isalukazi ebesihlala sodwa
Sitholwe yindodakazi isidumbu sesalukazi ebesihlala sodwa, sicwiywe izitho zomzimba.
KUVELA ukuthi besisolwa ngokuthakatha isalukazi okutholakale isidumbu saso emzini waso ngoLwesine sibu-lewe ngokuklinywa, maqede kwathathwa izicubu zomzimba waso.
Kuduma amakhanda emnde-nini wakwaNzimande, eNtabe-ni, KwaDambuza, eMgungu-ndlovu, ngokutholakala kwesidumbu sikaNkk Henrietta Nzimande (78), obehlala yedwa emzini wakhe, isidumbu sakhe sicwiywe indlebe, ocikicane nekhala.
Isidumbu sikaNkk Nzima-nde sitholwe yindodakazi yakhe. Indodakazi kamufi uNkz Nokuthula Nzimande, okuyiyona efike kuqala kubo yazithela phezu kwesidumbu sikanina sinezimpawu zokukli-nywa emqaleni, itshele ILANGA ukuthi iyolukhohlwa ifile lolu suku.
“Umama ubenenhliziyo elukhuni, engezwani noma-khelwane, ngisho nabazukulu bakhe ubengabafuni emzini wakhe. Nami ngiyindodakazi yakhe nje, besingezwani kahle.
“Ubengakhulumisani noma-khelwane bakhe, ehlale eziva-lele yedwa endlini, ephuma ngoba eyothenga esitolo noma eyohola impesheni.
“Ubengabahambeli omakhe-lwane bakhe uma beshonelwe, engayi ngisho esontweni. Bengihlale ngifika zonke izi-nsuku ngizombheka ngoba ubehlala yedwa, kodwa nakhona ubebuye angixoshe, anga-ngifuni emzini wakhe.
“NgoLwesithathu ngangihleli naye ngamshiya endlini eziphilela kahle, kungekho lutho olusolisayo, savalelisana kahle ngamtshela ukuthi ngizombona ngakusasa.
“NgoLwesine ngifike ekhaya ngabo-10 ekuseni ngiyombheka ukuthi ulale kanjani nje-ngenhlalayenza. Ngithuke ngacishe ngashayeka phansi uma ngingena
endlini, ngihlanga-tshezwa yigazi ligcwele phansi.
“Ngizithele phezu kwesidu-mbu sakhe silele ephaseji,
singagqokile, izimpahla enga-mshiya ezigqokile bezisapha-zeke phansi, zidabukile.
“Ngibe sengiqaphela ukuthi indlebe yangasesandleni sokudla, ocikicane bobabili nekhala akukho.
“Esiphongweni ubenembobo enkulu engingazi ukuthi ba-mlimaze ngani.
“Induku yakhe yokudondolozela ibiphukile, kubukeka
sengathi baqale bamshaya ngayo,” kusho uNkz Nzimande.
Uthi ababulali bakanina bagqekezile njengoba isicabha besifile, baqede ukumbulala bathatha izicubu zakhe basha-ya bachitha bengathathanga lutho olunye endlini.
UNkz Nzimande uthi unina ubulawa nje, omakhelwane bake bamsola ngokuthi uyatha-katha endaweni, waze waxabana nomunye womakhelwane isimo sashuba, udaba lwabuya nasenduneni.
“Umuntu owenze le nto
kuyacaca ukuthi ubezofuna umphefumulo wakhe nezicubu zakhe kuphela ngoba kabatha-thanga lutho endlini, ngisho isikhwama sakhe semali abe-jwayele ukusibophela esinqe-ni, besikhona,” kusho uNkz Nzimande.
Utshele leli phephandaba ukuthi unina ubephila impilo eyehlukile, ubengafuni muntu emzini wakhe, ekuthanda ukuhlala yedwa.
Uthi kwala ngisho esemza-mela umuntu ozohlala naye ukuze amgade ngoba ebona ukuthi usekhulile futhi useyadondolozela uma ehamba, kodwa wamxosha, wathi akafuni muntu emzini wakhe.
“Siphatheke kabi ngendlela abantu abambulale ngayo umama ngoba ubesemdala ukuthi sebengaze bambulale ngesihluku esingaka,” kubalisa uNkz Nzimande.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembe-ka Mbhele, uthe amaphoyisa avule icala lokubulala, asaphe-nya.
Previous articleLiyashuba elibhekene nesikhulu samaphoyisa
Next articleAbomfundaze bayazihlangula ekufeni komfundi